VirtualBox 4.1.१ डाउनलोडको लागि उपलब्ध लिनक्सबाट
VirtualBox 4.1.१ डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ
केही घण्टा अघि बजेट हामीलाई नयाँ संस्करण दिन्छ VirtualBox: VirtualBox v4.1
को लागी उपलब्ध छ Ubuntu 11.04, डेबियन स्किज, फेडोरा 14, RHEL,, OpenSUSE १२.१ र केहि अन्य डिस्ट्रो;)। भर्चुअलबक्स 4.1.0 यसको लागि संस्करण पनि छ सोलारिस, Windows y MacOS.
जब हामी बाट परिवर्तन हुन्छौं भर्चुअलबक्स 3.2 तिर 4.0, हामीले हटाउनु पर्छ v3.2 को सही अपरेशनका लागि v4खैर अब हामीले उही प्रक्रिया गर्नु पर्छ। हामीले हटाउनु पर्छ VirtualBox v4 कुनै समस्या बिना स्थापित गर्न सक्षम हुन भर्चुअलबक्स 4.1
यस संस्करणमा नयाँ के छ:
अब हामी भर्चुअल मेसिनहरू क्लोन गर्न सक्दछौं VBox प्रबन्ध गर्नुहोस् र यसको GUI.
New नयाँ HDD निर्माण विजार्ड सुधार गरियो (नयाँ आभासी डिस्क सिर्जना गर्नुहोस्).
HDDs प्रतिलिपि गर्न विजार्ड थपियो (भर्चुअल डिस्क प्रतिलिपि गर्नुहोस्).
64-1-बिटको लागि मेमोरी सीमा १ टीबीमा बढाइयो।
Mod मोड्युलहरू र सुविधाहरूको सजिलो परामर्श अतिथि थप.
थपिएको «सामान्य ड्राइभरNetwork नेटवर्क सेक्सनमा।
Hosts होस्टहरूको साथ स्थिर समस्या कर्नेल 2.6.29. वा कम।
नयाँ नेटवर्क सुरुnel मोड थपियो UDP (नेटवर्किंग मोड UDP टनेल) विभिन्न सर्भरहरू / सेवाहरू चलाउँदै भर्चुअल मेशिनहरूलाई पारदर्शी र सजिलोसँग सञ्चार गर्न अनुमति दिन।
का लागि प्रयोगात्मक समर्थन हट प्लगिंग SATA HDDs लाई।
Gs धेरै बगहरू फिक्स गरियो।
यी सबै होइनन्, ती केवल तिनीहरू हुन् जसले मेरो ध्यान सबैभन्दा बढी आकर्षित गरे। पूर्ण सूचीको लागि पहुँच गर्नुहोस् आधिकारिक परिवर्तन.
यो नयाँ संस्करण प्रयोग गर्न, तपाई कि त यसको आधिकारिक भण्डारहरू प्रविष्ट गर्नका लागि कुर्नुहोस्।आर्चलिनक्समा तपाईंले आज वा भोलि प्रविष्टि गर्नुपर्छ * - *) वा यदि तपाईं आफैं यसलाई डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ भने: VirtualBox डाउनलोड सेक्सन
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » VirtualBox 4.1.१ डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ
के तपाईंलाई आर्चको बारेमा केहि थाहा छ? हेरौं कि यसले मलाई कोड १ र कर्नेल समस्याहरू दिन रोकिन्छ जुन मलाई दिक्क लाग्यो
आर्कमा पहिले नै प्रविष्ट गरीएको छ, र पार्टनरलाई मलाई थाहा छैन कि त्रुटि जुन तपाईंलाई दिन्छ।
मोड्युल्स सेक्सनमा rc.conf मा तपाइँसँग हुनुपर्दछ: usblp vboxdrv vboxnetflt
जाँच गर्नुहोस् कि, सम्भवत: त्रुटि रहेको छ।
यी सबै मूर्खहरू जो सबै कुरा जान्दछन् भाड्नुहोस्, मैले पहिले नै यो जोड दिएँ कि यो त्यो बुल्शिट हो कि होइन
मोड्युलहरू वा प्रेतहरू? म बरु उत्तरार्द्धलाई लाग्छ
ठीक छ, मोड्युलहरू, जुन मैले यसलाई प्रेतहरूमा राखेको थिएँ
मैले यस लेखलाई धिक्कारै पारेको छु
यो एक जस्तै थियो जसलाई खोकी र स्क्र्याचहरू छन् जहाँ मलाई थाहा छ
समान राख्नुहोस्, म त्यहाँ फेला पार्छु
मोड्युलहरूमा। ती कर्नेल मोड्युलहरू हुन् जुन VBox लाई लोड गर्न आवश्यक पर्दछ, vboxdrv वा मोड बिना ... कार्य गर्न तपाईलाई VBox गर्न सम्भव छैन HAHA !!!
फ्रेन्ड्स डे: भिडियो माइक्रोसफ्टले उनको जन्मदिन मा लिनक्समा पठायो
Mageia २ (क्यालेन्डर, समर्थन र विवरण)